यो कस्तो प्रेम ??प्रेमीको शब जलिरहँदा प्रेमिकाको शब मोदिखोलामा बग्दै आएपछि…. - Mela Pat
गृह पृष्ठ विचित्र संसार यो कस्तो प्रेम ??प्रेमीको शब जलिरहँदा प्रेमिकाको शब मोदिखोलामा बग्दै आएपछि….
पर्वत,१७ भदौ–भदौको महिना , उर्लेको मोदीखोलाको किनारमा सबै शोकमा डुबेका थिए । मोदी गाउँपालिका वडा नं २ र ५ मा पर्ने मोदीखोला पातीखोलाको संगममा एक जना १८ बर्षे लक्का जवानको शबमा आगो दन्किरहेको थिaयो ।
उनीहरुले किन यस्तो अप्रिय निर्णय लिन पुगे भनेर अहिले सबैले आश्चार्य मानेका छन् । सोमबार साँझ मोदीखोला र पातीखोलाको किनारमा देखिएको हृदयबिदारक घटनाले धेरैको मनमा शंका उब्जादिएको छ यस्तो निर्णय नलिएको भए हुन्थ्यो । सबैले भन्दैथिए ‘ संगै जीउने र मर्ने कसम खाएका प्रेमी प्रेमिकाहरुले आवेगमा यस्ता गलत निर्णय गर्दा आफन्त र परिवारमा गहिरो चोट पर्न जान्छ भन्ने सोच्दैनन, गलत बाटो रोज्छन।’ नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट